के तपाई वाईफाई स्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? स्पीड बनाउन अपनाउनुस् यस्ता उपाय « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
के तपाई वाईफाई स्लो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? स्पीड बनाउन अपनाउनुस् यस्ता उपाय
प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसंगै प्राय व्यक्तिको घरमा इन्टरनेट जडान गरिएको हुन्छ । तर कहिलेकाही इन्टरनेट स्लो भइदिंदा यसले तनाव पनि सिर्जना गर्छ । यदि तपाईँको घर या अपिसमा पनि वाईफाईको स्पीडमा समस्या भईरहेको छ भने केहि सजिलो किसिमले तपाईँले त्यसको स्पीड बढाउन सक्नुहुनेछ ।
प्रकाशित मिति : भाद्र २५, २०७७ बिहीबार १२ : २३ बजे